बजार साइडवेजमा, आगामी साता के होला ? - Arthasansar
विहीबार, ०९ मंसिर २०७८, १६ : २१ मा प्रकाशित
केहि दिनदेखि नेप्से साइडवेजमा गएको छ । हिजो बजारमा ड्रागन फ्लाई डोजी बनिसकेपछि आज बजार मज्जाले बढ्ने प्राय: को अनुमान विपरित आज पनि बजार ३.२२ अंकले घटेको छ । बजारमा त्यति ठूलो उतार चढाव पनि नआउनु र कारोबार रकम पनि न्युन हुँदै जानुले लगानीकर्ताहरु 'पर्ख र हेर 'को अवस्थामा रहेको देखाउदछ ।
विषेश गरि लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षालाइ कुरेको देखिन्छ। कतिपय लगानीकर्ताहरु समिक्षाले तरलता संकटको साथै सेयर धितो कर्जामा लागेको ४/१२ को क्यापको सन्दर्भमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने आशामा छन् भने कतिपय चाहिं राष्ट्र बैंकले २/३ महिना भित्रैमा आफ्नो नीति परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ भन्छन।
प्राविधिक रुपमा के देखिन्छ ?
नेप्सेमा आज स्पिनिङ्ग टप क्यान्डल बनेको छ । यसले बजारमा खरिद चाप र बिक्रिचाप बराबरीको अवस्थामा रहेको बुझाउँछ ।
बजारले २७५० को ट्रेन्डलाइन सपोर्टलाइ ब्रेक गरिसकेपछि बजारले अपट्रेन्ड मुभमेन्ट लुज गरिसकेको छ । बजार बढ्ने क्रममा गयो भने अब लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने बिन्दु भनेको २७७० को बिन्दु हो । २७७० लाइ क्लोजिंग बेसीसमा राम्रो भोलुम सहित क्रस नगरीकन बजारमा ठुलो मुभको अपेक्षा गर्न सकिदैन । बजार घट्दो क्रममा गयो भने पहिको सपोर्ट २६९० को बिन्दु हुनेछ भने २६९० को बिन्दुमा सस्टेन हुन नसकेमा लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु २६७० को बिन्दु हो ।